Iingoma ezibandakanya iGrike likaThixo iHayidesi
I-Biography yeGrike likaThixo iHayidesi
IHayidesi, ebizwa ngokuba nguPluto ngamaRoma, yayingunkulunkulu welifa, ilizwe labafileyo. Ngelixa abantu banamhlanje becinga ngendawo yehlabathi njengesiGrike kunye nomlawuli walo njengento yokuziphatha okubi, amaGrike kunye namaRoma abavakalelwa ngokungafaniyo ngehlabathi. Bayibona njengendawo yobumnyama, befihliwe ekukhanyeni kwemini, kodwa iHadesi yayingendawo. Wayenguye, endaweni yoko, umgcini wemithetho yokufa; Igama lakhe lithetha "ongabonakaliyo." Nangona iHadesi yayingenakulungiswa, nangona kunjalo, wayesethusa; Abantu abaninzi baye bagweba ukuthetha igama lakhe ukuze bangabhenki.
Ngokwamagama aseGrike, oothixo bokuqala abakhulu beTitans, uCronus noRhea. Abantwana babo babandakanya uZeyusi, iHadesi, iPoseidon, uHastia, uDemeter noHera. Emva kokuva isiprofeto sokuba abantwana bakhe babeza kumnqumla, uCronus wagwinya bonke kodwa uZeus. UZeus wakwazi ukuphoqelela uyise ukuba adibanise abantakwabo, kwaye oothixo baqalisa imfazwe ngokumelene neTitans. Emva kokuwulwa kwemfazwe, oonyana abathathu babenza inkatho ukukhetha ukuba ngubani oya kulawula kwi-Sky, Sea, ne-Underworld. UZeyus waba ngumlawuli wezulu, iPoseidon yolwandle, kunye neHadesi ye-Underworld.
Ngelixa ihlabathi lalingumhlaba wabafileyo, kukho amanani amaninzi (kuquka i-Odyssey) apho amadoda aphilileyo eya eHadesi aze abuyele ngokuphepha. Ichazwa njengendawo yokulila yezinto ezimbi kunye nobumnyama. Xa imiphefumlo yanikelwa ekufeni phantsi koothixo kaHermes, babesele bawela ngaphesheya koMlambo i-Styx ngumqhubi wemikhosi, i-Charon.
Ukufika emasangweni aseHayidesi, imiphefumlo yayibingelwa nguCerberus, inja enentlanzi eneentloko ezintathu. I-Cerberus ayinakuyithintela imiphefumlo yokungena kodwa iya kubagcina bengabuyeli ezweni labaphilayo.
Kwezinye iingcamango, abafileyo bagwetywa ngokuchonga umgangatho wobomi babo. Abagwetywa njengabantu abalungileyo baphuza kuMlambo iLeehe ukuze babalekele zonke izinto ezimbi, baze bachithe ngonaphakade kwi-Elysian Fields emangalisayo.
Abagwetywa njengabantu ababi bagwetywa ngonaphakade kwiTartarus, isiGrike.
IHadesi kunye nePerphone
Mhlawumbi ibali elibi kakhulu ngeHayidesi kukuthatha iPerphone . IHayidesi yayingumzalwanina ka-Persephone unina uDemeter . Ngethuba intombazana iPerphone yayidlala, iHadesi kunye nenqwelo yakhe yavela ngokukhawuleza ekuqhekekeni emhlabeni ukumbamba. Ngethuba e-Underworld, iHadesi yazama ukuphumelela ukuthandwa kwama-Persephone. Ekugqibeleni, iHadesi yamkhohlisa ukuba ahlale naye ngokumnika igromegranate eyayilinga. I-Persephone yayidla imbewu yamarharnate emithandathu; ngenxa yoko, waphoqeleka ukuba achithe inyanga ezintandathu zonyaka ngamnye e-underworld eneHayidesi. Ngelixa i-Persephone isemhlabeni, unina unxunguphalo; izityalo ziyaba zife. Xa ebuya, entwasahlobo ivelisa ukuzalwa kwakhona kwezinto ezikhulayo.
UDemeter kunye nabazalwana bakhe uZeus, iHadesi kunye noPoseidon
IHades neHeracles (iHercules)
Njengomnye wokusebenza kwakhe ngoKumkani uEurystheus , iHeracles kwafuneka ifake iHades i-Watchdog Cerberus evela e-Underworld. I-Heracles yayincedo lukaThixo-mhlawumbi evela e-Athena. Ekubeni inja yayiboleka kuphela, ngezinye iHadesi yayibonakaliswa ngokuzimisela ukuboleka uCerberus - ngokude nje ukuba uHeracles ayisebenzise isixhobo sokubamba isilo esiyingozi.
Kwakuye kwenye indawo iHayidesi ibonakaliswe yingozi okanye isongelwa yiqela kunye ne-Bowling-Heelding Heracles.
Lezi ziTame zokuThabatha iPhonephone
Emva kokudukisa intombazana uHenel of Troy, uLeusus wanquma ukuhamba noPerithous ukuba athathe umfazi weHadesi-Persephone. IHayidhe yabakhohlisa abo bantu babini ukuba babe nezihlalo zokulibala apho babengenakuvuka baze bafike uHeracles ukuba abahlangule.
I-Athena, umfazikazi ongumGrike woBulumko
Ngubani I-Polyphemus Kwimbali Yamandulo YesiGrike?
I-Greek Greek Apollo
Iindaba ezimnandi malunga neGrike uThixo uCronos
IHayidesi - iGrike likaThixo iHayidesi
Imifanekiso yabaLazi beMithi
Ukukhetha i-Pair ye-Ski Goggles
Iintsuku ezili-10 kunye noMamakazikazi onina
Yintoni iPurim Katan?
Ukutshintsha kweMhlaba kuchaphazela njani ukuguquka kwemvelo
Usuku lwe-Astronomy: Ixesha lokubhiyozela i-Universe
Inkcazo nenjongo yeMass Music
Ukwamkelwa kweYunivesithi yaseLincoln
I-Scale enkulu kwiBass
Ukushicilela iNcwadi Yomlando Yentsapho
Iingcaphuno malunga no-Elvis Presley
Shazam kunye neMidlalo yeClassical